१० औँ महाधिवेशनमा एमालेमय बन्यो चितवन : आजबाट भब्य शुरु हुँदै। - Malayakhabar
होम पेज फिचर १० औँ महाधिवेशनमा एमालेमय बन्यो चितवन : आजबाट भब्य शुरु हुँदै।
१० औँ महाधिवेशनमा एमालेमय बन्यो चितवन : आजबाट भब्य शुरु हुँदै।
चितवन:= नेकपा एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज (शुक्रबार)बाट सुरु हुँदैछ । चितवनको नारायणी नदी किनारमा हुने महाधिवेशनको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उद्घाटनका लागि अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू बिहीबार नै चितवन पुगिसक्नुभएको छ।
उद्घाटन सत्रलाई अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार बन्दसत्रलाई पार्टी अध्यक्ष ओली र विदेशी पाहुनाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलगत्तै निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । साँझ ६ बजेसम्ममा उम्मेदवारी दर्ता, फिर्ता लिने, दाबी विरोधलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने भनी समितिले सूचना दिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
उद्घाटनपछि सबै प्रतिनिधिहरू सौराहा जानेछन् । ११ मंसिर बिहान ८ बजेदेखि बन्दसत्र सुरु हुनेछ । बन्दसत्र सञ्चालनका लागि ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ । १२ मंसिर बिहान ८ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ । सयवटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमध्ये १० वटा स्टक राखेर ९० वटामा भोटिङको काम हुने उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यो दिन साँझसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशनलगत्तै एमाले चुनावको तयारीमा जाँदै छ । स्थानीय चुनाव, संघ र प्रदेशका चुनावमा एमालेले बहुमत हासिल गर्नेगरी एउटा संकल्प गरेर फर्किन्छ । यो महाधिवेशन एकता र सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ । पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले समाधान गर्दै एमालेलाई यो देशको एकमात्र कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने काम हुन्छ ।’
एमालेले महाधिवेशनस्थल भव्य बनाएको छ । जिल्लाका चोक-चोकमा झण्डा राखिएको छ । ५० भन्दा बढी स्वागतद्वार निर्माण गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न साढे सात करोड बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा पनि प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ ।
उद्घाटन सत्रमा पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम-जनसमुदायसमेत गरी पाँच लाखजना सहभागी हुने एमालेको अपेक्षा छ । सहभागीहरूलाई नारायणी नदी किनारको नारायणगढ र गैँडाकोट दुवैतर्फ राखिने उहाँले बताउनुभयो । उद्घाटनमा जिल्लाको सात स्थानबाट जुलुस निकाल्ने तयारी एमालेको छ ।
बन्द सत्रमा भूगोल, जसंगठन, विभाग, सम्पर्क कमिटी र प्रवास कमिटीका गरी दुई हजार १७५ प्रतिनिधि र १०३ जना पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधिहरूमध्ये ६२७ जना महिला प्रतिनिधि हुनेछन् । दलित उत्पीडित क्षेत्रबाट २०९ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी गराइएको छ ।
सात दललाई निमन्त्रणा, प्रचण्ड र माधव नजाने
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न दलका नेता चितवन जाने भएका छन् । महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी हुने एमाले नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने निश्चित गरेको एमाले सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
एमालेले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटा राजनीतिक दललाई उद्घाटन समारोहमा निम्तो गरेको भए पनि एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने निम्त्याएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउने/नआउने टुंगो नभएकोले सहभागी हुने सम्भावना न्यून छ। महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर बिहीबार नै चितवन पुग्नुभएको छ । बुद्ध एयरबाट उहाँ चितवन पुग्नुभएको हो ।
आठ पार्टीका १५ विदेशी पाहुना आउने निश्चित, चीनबाट नआउने
एमालेको निमन्त्रणा स्वीकार गरी आठवटा विदेशी पार्टीका १५ जना पाहुनाहरू उपस्थित हुने निश्चित भएको छ । नेकपा (एमाले) विदेश मामिला विभागले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र कम्बोडियाबाट आठवटा पार्टीका १५ जना पाहुनाहरू महाधिवेशनमा उपस्थित हुने निश्चित भएको जानकारी गराएको हो ।
यसका साथसाथै २५ वटा देशबाट महाधिवेशनका लागि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डा.राजन भट्टराईले बताउनुभयो । विदेशी पाहुनाहरूलाई काठमाडौंमा रहँदा होटल सोल्टीमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको र मंसिर ९ गते (बिहीबार) साँझ एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डा. भट्टराईले रात्रिभोजको आयोजना गरेको जनाइएको छ ।
विदेशी पाहुनाहरूले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता जनाउँदै शुभकामना पनि दिने अतिथि सत्कार समितिले जानकारी दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले विदेशी पाहुनाहरूलाई मंसिर १२ गते बिहान चितवनमा संयुक्त ब्रेकफाष्ट मिटिङ गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। अतिथि सत्कार समितिका अनुसार चितवनमा रहँदा पाहुनाहरूलाई ग्रिन मेनसन जंगल रिसोर्टमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउनुका साथै जीप सफारी र थारू सांस्कृतिक प्रदर्शनीको अवलोकनसमेत गराइने भएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी नहुने भएका छन् । उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन विभिन्न देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने भए पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट कोही नआउने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख तथा १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले बताउनुभयो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी नभए पनि भिडियो सन्देश भने पठाइएको छ ।
एमाले महाधिवेशनमा शुभकामना दिन प्रतिनिधि नभएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले भिडियो सन्देश पठाएर महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिन लागेको संयोजक भट्टराई बिहीबार नारायणी नदी किनारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
विमानस्थलबाटै नेताहरूको उम्मेदवारी घोषणा
नेकपा एमालेले नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्ने बताइरहँदा अध्यक्षमा भीम रावलले अध्यक्ष ओलीलाई टक्कर दिने देखिएको छ । ओलीले रावललाई मनाउने कुनै प्रयास नगरे प्रक्रिया निर्वाचनतर्फ मोडिने संकेत देखिएको छ । अध्यक्षमा मात्रै नभएर अन्य पदमा पनि आकांक्षीहरू धेरै भएपछि पदाधिकारी चयनमा सहमतिको सकस हुने देखिन्छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका अधिकांश नेताहरूले विमानस्थलबाटै आफ्नो दाबेदारी घोषणा गरेका छन्।
एमालेलाई माओवादीबाट आएका र १० बुँदे सहमति गरी एमालेमा रहेका नेताहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्रोतका अनुसार ओलीनिकट नेताहरूले एक-आपसमा निर्वाचन नलड्ने मनिस्थिति बनाएको भए पनि केहीले भने उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आफू फेरि सचिवमा दोहोरिने योजनामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यकारी भूमिकामा बस्न अझै समय रहेकाले फेरि एक कार्यकाल सचिवमा दोहोरिने संकेत गर्नुभएको हो । उहाँले एकैपटक माथि चढ्न खोजे लुँडो खेलमा जस्तै लडिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । यस्तै, नेता महेश बस्नेत र शेरबहादुर तामाङले पनि सचिवमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ ।
उता, कर्णाली प्रदेश सह-संयोजकसमेत रहनुभएका पूर्व-मन्त्री यामलाल कँडेलले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ । कर्णालीले कम्तीमा एक पदाधिकारी पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले आफ्ना लागि मत माग्न सुरु गनुृभएको छ ।
यसैगरी, भरतपुरबाटै प्रदेश नम्बर-१ का पूर्व-मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि सचिवमा उम्मेदवारी दिनेगरी तयारी गरेको बताउनुभएको छ । एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट राई पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वाचित राईले यसपटक आफू सबैभन्दा कान्छो पदाधिकारीका रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसपटक राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफूलाई सबैभन्दा कान्छो पदाधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने निधो गरेको छु । त्यो भनेको हामीले विधान महाधिवेशनमा सातजना सचिवको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो सातमध्ये एउटा सचिवमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छु ।’
महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेको दाबी
नवौँ महाधिवेशनमा महासचिवमा पराजित एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यसपटक पनि महासचिवमा दाबी गर्नुभएको छ । विगतमा पनि आफू महासचिवको उम्मेदवार भएकाले अहिले पनि त्योभन्दा तल झर्ने चाहना नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले महासचिव वा त्योभन्दा माथि जाने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै भन्नुभयो, ‘यही पद भनेको छैन । सहमतिमा टुंगो लाग्छ । म हिजो केमा थिएँ ? सबैलाई थाहा छ त्यहीअनुसार हुन्छ ।’ नवौँ महाधिवेशनमा पाण्डे ईश्वर पोखरेलसँग महासचिवमा पराजित हुनुभएको थियो ।
१५ जना पदाधिकारीमा धेरै आकांक्षी रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले अधिवेशनबाट केही पद सिर्जना गर्न सक्ने संकेत पनि गर्नुभयो।ओलीसँग १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा रहनुभएका नेताहरूले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने आफ्नो मूल्यांकन पार्टीले गर्ने भन्दै मुख खोल्नुभएको छैन । उहाँले आफूले अहिले कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा नगर्ने बताउनुभएको छ ।
अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएकाले आफूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी घोषणा नगर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पार्टीले आफ्नो उचित मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुछ । महाधिवेशनमा आएका छौँ । अरू कमरेडहरूसँग छलफल हुन्छ । मैले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु मेरो उचित मूल्यांकन हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
अघिल्लो लेख पाकिस्तानको ऋण ३० हजार खर्ब नाघ्यो : देश चलाउन समस्या भइरहेकाे छ: इमरान खान।
पछिल्लो लेख कम्पनी भन्छ : ‘सरकारले भनेर हुन्छ हामी ‘नम्बर वान’ छौँ’